Mm Business (http://mmbusinessnews.blogspot.in/) | ဂန္တ၀င်
Home Myanmar Websites Myanmar Business News Mm Business (http://mmbusinessnews.blogspot.in/)
Mm Business (http://mmbusinessnews.blogspot.in/)
Mm Business သတင်းဆိုဒ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဆိုင်ရာနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချက်အလက်များအားလုံးကိုအချိန်နှင့် တပြေးညီဖော်ပြပေးနိုင်သောဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ- ဂျပန်နိုင်ငံမှ ရင်းနှီးမြုပ်နှံနေသောထားဝယ် ရေနက်စီမံကိန်းအကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာဘဏ်များမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဘဏ်ဖွင့်ခွင့်လိုင်စင်များ၊ (၂) နှစ်အတွင်းရန်ကုန် စတော့အိတ်ချိန်းဈေးကွက် ဖွင့်လှစ်သည့် အကြောင်း၊ ပြည်သူလူထု ဆန္ဒကြောင့် ကျောက်ဖြူ-ကူမင်းရထားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းရပ်လိုက်သည့် သတင်းများ၊ ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်းအားတိုးမြှင့် တည်ဆောက်ခြင်းအကြောင်းအရာများ၊ မြန်မာဆက်သွယ်ရေးမှ တင်ဒါအောင်မြင်သောအော်ရီဒူးဖုန်းလိုင်းဝန်ဆောင်မှုမှ ဆင်းကဒ်များအကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဓာတ်ဆီတင်သွင်းမှုမြင့်တက်လာသည့် အကြောင်းများစသည့် အကျိုးရှိသောသတင်းများ ဖြစ်သည်။ သတင်းရင်းမြစ်များကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ တစ်ချို့သောသတင်းဆောင်းပါးများကိုလူသိများသောသတင်းဌာနများမှ ကူးယူဖော်ပြတတ်သည်။ ဥပမာ- မြန်မာ့ တိုင်းမ်၊ ကြေးမုံ၊ အီလဲဗင်းစသည့် ထင်ရှားသောသတင်းဌာနများမှဖြစ်သည်။
MM Business News isaplace to gain all the information about Myanmar Business News. MM Business News updates all up-to-the-minute Burmese News; consistingof all the latest trendy topics like Japan seeking investment opportunity in Dawei, Myanmar to Grant Licenses to Foreign Banks, Yangon Stock Exchange to open in two years, Myanmar planning nuclear reactor for research purposes, TAITRA hosting auto parts show in Myanmar, Denmark to assist Myanmar education sector,
More Airlines to serve Myanmar, Kyaukpyu-Kunming railway’s cancelled due to public disapproval, Yangon circular railway to be upgraded, Ooredoo announcing distributorsfor Burma mobile rollout, The declination of Burma’s oil production; Fuel imports to increase, etc, etc. Some news are shared from the reliable and popular Myanmar Online
Websites such as, The MM Times, The Mirror, Eleven Myanmar and so on.
Previous articleNaing Group Capital – NGC (http://nainggroupcapital.com/)
Next articleThwe Than Lwin (http://thwethanlwin.wordpress.com/)